विनोदविक्रम केसी - कान्तिपुर समाचार
विनोदविक्रम केसीका लेखहरु :
इमान बाँकी भएको अन्तिम होमो सेपियन्सका रुपमासंसारले उहाँलाई रत्नपार्कको फुटपाथमा फेला पारेको थियो
तिमीले मलाई दिएको पहिलो शिक्षा थियो— कदापि नघस्रिनू जिन्दगीमा बग्नू, कहिले मतापमा आफ्नै पिरतीलोकमा मग्न मायालुझैं बग्नू, कहिले गडगडाएर दुनियाँ फेर्न व्यग्र बागीझैं
जुलुस गइरहने मान्छे
(कवि भूपाल राईप्रति । जो २०३६ सालदेखि सडकमा छ  ! जुलुसरत छ ।)आजसम्म जीवन जे–जति बन्यो जिउनलायक जुलुस गएरै बनाएको हुँ मैले
मुटु कुल्चिजाने एक दिवसमाथि सनातन दुःखीको टिप्पणी
संविधान ! मलाई एक पेग हिृवस्की दे !मैले कहिले त्यसो भनेँ ?
र, एकाएक अंकमालहरू भूमिगत भए । र, एक–एक गरी कोमल, हार्दिक अनि मिठासपूर्ण अंकमालहरू गायब भए ।कठोर अँगालोहरूमा जकडिएको छु अचेल । भयको अँगालो, अनिश्चयको अँगालो, अविश्वासको अँगालो, बन्धनको अँगालो । अनि, बजारवादी क्रूरताको अँगालो ।